स्वास्थ्य – Page 39
प्रिय करुणाजी, म ५० वर्षको भएँ । मैले ४० वर्षको हुँदा २७ वर्षकी युवतीसँग विवाह गरेको थिएँ । विवाह गरेको केही समयपछि मैले थाहा पाएँ, जीवनमा जागिर, पैसा, प्रसिद्धि ठूलो कुरा होइन...
बागलुङका एक डाक्टरले अमेरिकामा चामत्कारिक सफलता प्राप्त गरेका छन्। अमेरिकाको जर्जिया राज्यस्थित इन्स्टिच्युट फर बायोमेडिकल साइन्स विश्वविद्यालयमा कार्यरत डा.सुदीप खड्कासहित ११ वैज्ञानिकको टोलीले विश्वमै खतरनाक मानिएको इबोला भाइरसको औषधि पत्ता लगाएको शोधपत्र...
अदुवा हालेको चिया सबैले खान्छन् । तर त्यसका फाइदाबारे सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । जाडोमा अदुवा हालेको चिया पिउनुको आफ्नै महत्व छ । १ . अदुवामा भिटामिन सीको मात्र उच्च हुन्छ...
दिन मा 30 मिनेट योगा ले तपाईंको जीबन मा धरै परिबर्तन आउछ – Anu Yoga
योगा गर्न को लागि सबै भन्दा आवश्यक कुरा तपाईं को शरीर र मन हो । योग ले शान्ति दिन्छ । जब तपाईं आफै भित्र शान्ति हुन्छ तब तपाईं अरूसित शान्ति संग बाँच्न...
२५ वर्ष नपुग्दै श्रीमानको मायाबाट टाढा हुनुपर्दा अपूर्व पीडा हुन्छ, म के गरौं ?
मनोविद् तथा यौनविज्ञ करुणा कुँवरसँग जिज्ञासा र सुझाव म २८ वर्षकी युवती हुँ । मेरो नाम नमूना हो । मेरो विवाह भएको तीन वर्ष भयो । श्रीमान् राम्रो पैसा कमाउनुहुन्छ । बाहिरबाट...
डा:अचला वैद्य, सरसफाइ सबैका लागि आवश्यक छ। हाम्रो वरपरको वातावरण, खानपानका साथै शारिरीक सरसफाइ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। धेरैले नुहाउनुलाई मात्र सरसफाइ भन्छन्। तर, बाहिरी सफाइसँगै यौनांगको सफाइबारे धेरैले चासो राख्नैनन्। बालिकादेखि...
घुर्ने समस्यालाई हटाउन के के गर्नुपर्छ? यस्तो छ एकदम सजिलो उपाय ! भिडियोमा
घुर्ने बानीलाई आजकाल स्वास्थ्य समस्याका रुपमै लिइदैंन । घुर्ने मानिसलाई तत्काललाई केही असर नगरेपनि उसंगै सुतेको मानिसको निद्रामा असर पर्छ । घुराईले स्वास्थ्यमा समेत दुष्प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यसको सिधा सम्बन्ध मुटुसम्बन्धी...